ထိရောက်သောပုံရိပ်အမြင်: အမြင်အာရုံ cortex အတွက်ကျား, မကွဲပြားမှု? (၂၀၁၄) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
Steele et al ။ , 2013 ၀ န်းကျင်တောင်းဆိုမှုများကိုဝေဖန်ခြင်း (“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စမဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒများသည်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များမှထုတ်ယူလိုက်သောအာရုံကြောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်”)
အကျိုးသက်ရောက်စေရုပ်ပုံအမြင်: အမြင်အာရုံ cortex အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု? (2014)
Neuroreport ။ 2004 May 19;15(7):1109-12.
Sabatinelli: D1, Flaisch T က, Bradley MM, Fitzsimmons JR, lang PJ.
လူတွေကြားနေဓာတ်ပုံများကိုဖို့စိတ်ခံစားမှုဆွေမျိုးရှုမြင်သည့်အခါ extrastriate အမြင်အာရုံ cortex အတွက်လုပ်ဆောင်ချက် သာ. ကြီးမြတ်သည်။ မတိုင်မီကဦးနှောက်ပုံရိပ်နှင့် psychophysiological အလုပ်နောက်ထပ်ယောက်ျားသာယာသောရုပ်ပုံများကိုပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်, နှင့်အမျိုးသမီးနှစ်မြို့ဖွယ်ရုပ်ပုံများကိုပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ရန်အဘို့အရန်အဘို့အဇောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ရုပ်ပုံကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း 28 ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက် fMRI သုံးပြီးအမြင်အာရုံ cortical လှုပ်ရှားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဆက်စပ်မှုအာရုံကိုညွှန်ကြားခြင်းနှင့်ပီပီသိမှုဆိုင်ရာအာရုံအပြောင်းအလဲနဲ့ပိုကောင်းစေပါတယ်သောအမြင်နှင့်ကိုက်ညီကြားနေဖို့ဆွေမျိုးသာယာသောနှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်နှစ်ဦးစလုံးဓါတ်ပုံတွေ, စဉ်အတွင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော သာ. ကြီးမြတ်အမြင်အာရုံ cortical reactivity ကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ယောက်ျားဖြစ်နိုင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်ရေးများအတွက်ကျား-တိကျတဲ့အမြင်အာရုံယန္တရားထင်ဟပ်ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပုံအမြင်စဉ်အတွင်းအထူးသအမျိုးသမီးတွေထက် သာ. ကြီးမြတ် extrastriate လှုပ်ရှားမှုပြသပြုလေ၏။